CAYAYAANKA UGU WEYN EE EGGPLANT IYO SIDA LOOLA DHAQMO IYAGA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Cayayaanka Eggplant: sharaxaad, ka hortagga, tallaabooyinka xakamaynta
Eggplant waxaa iska leh qoyska Solanaceae. Sababtoo ah tirada badan ee nafaqeeyayaalka yar yar iyo fitamiinada waa mid ka mid ah qaybaha cuntooyinka saxda ah. Markii ugu horeysay waxaa lagu beeray Koonfur Asiya, sidaas darteed wuxuu jecel yahay cimilada iyo cimilada kulaylaha. Xaaladaha kale ee cimilada, sidoo kale waa koray, laakiin lagu koriyo oo loo isticmaalo, iyo beerto waxaa lagu fuliyaa by seedling.
Daryeelidda ukunta ayaa u baahan dadaal gaar ah iyo fiiro gaar ah, waxaa loo tixgeliyaa in ay yihiin dhirta dhaadheer, mana aha mid aad u fudud in beerta qurxinta leh si ay ula qabsadaan beerahooda. Cayayaanka badankoodu maaha kuwo waxtar leh si ay u cunaan dhirta oo ay u dhacaan dalagga. Waa muhiim inay awoodaan inay aqoonsadaan cayayaanka waqtigooda oo ay qaataan tallaabooyin lagula dagaallamo.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, eggplant waxaa loo arkaa khudrado sun ah sababtoo ah dhadhan qadhaadh. Waxa uu dhulka ku jiray budo waxaana lagu rusheeyaa cadow la neceb yahay.
Waxaan la dagaallannay caarada caarada
Cayayaanka caadiga ah ee Solanaceae waa caarada caarada. Lama arki karo indhaha qaawan.iyo saameynta joogitaanka joogtada ah ee markiiba waa la arki karaa - shillinta ayaa aad u jilicsan. Xiridda dusha hoose ee caleen oo leh shabakad yaryar (waxay u egyihiin "sawir marble"), calaamadda saxaradu waxay u dhigtaa waxayna ku quudisaa cabitaanka nolosha. Burburka geedka ayaa u muuqda sida in si joogto ah loo duro (godad badan ayaa ka muuqda caleemaha iyo gareynta).
Haddii aadan fiiro gaarin wakhtigaas, markaa jirku wuxuu ku daboolan yahay dhibco, caleemuhuna waxay gashadaan tuubo. Dhaqdhaqaaqyada taranka ee caarada caarada ayaa aad u sarreeya, jiil cusubi wuxuu soo baxaa 2-3 todobaad kasta. Haddii ay dhacdo jawaab celin ka dib cayayaankan, waxaad lumin kartaa miraha oo dhan.
Isticmaalka kiimikada waxaa ku jira insecticaroicaricides iyo acaricides. Raadinta tilmaamaha, xal diyaarinta waxaa loo diyaariyaa diyaarinta, kuwaas oo lagu buufin leh dhirta. Guryaha lagu farsameeyo waxaa lagu foogigated by gubida kiimikooyinka. Qiyaasta dhirta waxaa lagu daweeyaa ciid.
Hababkaan waxaa lagu dabaqi karaa kali ahaanshaha, laakiin sidoo kale iyaga ayaa la isku dari karaa.
Ma taqaanaa? Kuwa loogu talagalay in ay joojiyaan sigaar-cabista, waxaa lagugula talinayaa inaad ku darto ukumaha cuntada maalinlaha ah. Waxay ka kooban tahay fitamiin PP waxayna hoos u dhigeysaa baahida loo qabo nicotiinta.
Noocyada bayoolojiga ayaa lagu jiheeyay caarada caarada waxayna ku badbaadi karaan uun kale. Waxay u kala qaybsanyihiin laba nooc: Phytophagous (cayayaanka marmarka ah), oo cunta cufnaanta khudradda iyo ha ku dhicin geedka. Muddo gaaban waxay awoodaan in ay burburiyaan deegaanada waaweyn ee cayayaanka. Waxaa laga iibsan karaa xarumaha beerta ama dukaamada qaaska ah. Waxyaabaha bayoolojiga ka soo horjeeda shilinta, kuwaas oo loo isticmaalo qaab xal. Waxay ku buufin dhirta.
Hababka cagaarshowga waxay abuurayaan jawi aan fiicnayn oo ku saabsan jiritaanka saxda ah: kordhinta qoyaanka hawada iyo kordhinta waraabka foliar; dhirta la beeray ee ka cabanaya shilinta; burburin haramaha; geedi socodka.
Waxaa jira daaweyn badan oo dad ah. si loola dagaallamo loogana cabsiiyo caarada caarada, laakiin dhammaantood waxtar ma leh. Waxyeelo kala duwan iyo maraqyo leh geedo eggplant ayaa lagu buufiyaa iyaga. Isla markaad ogaato in cayayaanka ay ka muuqdaan ukumahaaga qoyan ee caarada caarada, isla markiiba ku bilaw dagaal. Si loo yareeyo tirada cayayaanka, ka saar oo gubi dhammaan caws.
Maxaa kale oo la beeray karaa eggplants: dill, basil, digir, zucchini, galley, basbaas, qajaarka, basasha, radishes, yaanyada.
Caleemaha iyo caleemaha waxyeelada leh waa in sidoo kale la gooyaa oo la gubaa. Go'aami habka xakamaynta iyo sii wadidda burburinta cayayaanku. Dhowr maalmood ka dib, kormeer geedaha oo hubso in qalabka aad dooratay uu caawiyay. Haddii dharbaaxo ama dhibco cusub soo baxaan, macnaheedu waa in daroogada la soo xulay ay tahay mid aan waxtar lahayn, waana in lagu beddelo noocyada kale ee halganka. Si hubaal ah uga takhalusaan dadka cayayaanka ah, daaweynta waxaa loo sameeyaa si joogta ah. Ka dib burburkii dhamaystirnaa cayayaanku, kormeeraan muuqaalka geedo iyo sameynta baaritaanka si looga hortago khalkhal cusub. Ka-hortagga waxaa ka mid ah hababka agrotechnik ee cayayaanka.
Tallaabooyinka xakamaynta Aphids
Aphids, sida caarada caarada, nuugaan dheecaan dhirta. Inkastoo ay muuqato in ay u muuqato mid aan dhib lahayn, waxay keeni kartaa dhaawac weyn oo dalagga ah. Nashaadkeeda nolosheeda waxay ku dhacdaa caleemaha, jirida iyo ubaxa dalagyada. Aphids ma ku quudiyaan on miraha, laakiin waa mid ka mid ah cayayaanka ugu khatarta badan on geedo eggplant. Unugyada dhirta ay saameeyeen by aphids yihiin deformed iyo qalalan. Cilad-xumadu waxay ka timaaddaa sababo sun ah in cayayaanka uu soo baxo marka la nuugayo cabitaanka nolosha. Cayayaanka Tani waxay daboolaysaa caleemaha papay (dheecaan macaan), taas oo ah jawi wanaagsan oo loogu talagalay fungus. Sidoo kale aphid waxay qaadataa dhammaan bakteeriyada suurtogalka ah.
Dhirta ay saameeyeen aphids waxay hoos u dhigayaan kobcintooda, dhamaystirka qalajinta dhalashada dhalmada ayaa dhici karta. Waxay burburin karaa abuurka oo dhan. Waxaa lagama maarmaan ah in si buuxda u burburiyaan cayayaan this, sababtoo ah, isagoo nuugay mid beerto ah, aphid ayaa qarin kara oo muuqan kara xilliyada beereed ee soo socda.
Waa muhiim! Miraha eggplant, kaas oo la sameeyey intii lagu guda jiray guuldaradii aphids, koraan yar yar ee size iyo ma ku haboon yahay isticmaalka. Waxay dhadhamiyaan qadhaadh.
Dagaalka ka dhanka ah aphids waa inuu noqdaa mid adag, haddii kale burburku wuxuu noqon karaa mid aan waxtar lahayn. Isla markiiba waxay bilaabaan inay isticmaalaan kiimikada kiimikada cayayaanka oo si dhaqso ah u kala jajaban. Maadooyinka noocan oo kale ah ha joogin oo ha ku ururin geedka. Daawooyinka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah: Karbofos, Aktellik, Detsis Profi, Aktara. Markaad isticmaashid daawooyinkaan si adag u raac tilmaamaha, mid walbana wuxuu leeyahay qaabka codsiga. Sidoo kale iska ilaali ilaalinta shakhsiyeed, maqaarka iyo xuubka xuubka ayaa u nugul cayayaanka. Isticmaal gacmo gashi, oogada ama maaskaro. La shaqee sunta sunta ah waxay ku qaataan cimilada qalalan.
Waa muhiim! Eggplants waa in aan lagu daaweyn kiimikada inta lagu jiro ubax iyo fruiting.
Daawooyinka dadweynaha waxaa loo isticmaalaa haddii guuldarada aphids ay dhacdo inta lagu jiro ubax ama midho dhalasho. Siyaabo dhowr ah oo loola dagaalamo:
Baaldiyaha ten-litir, isku dar qasacadaha baradhada, yaanyada, celandine, toonta iyo balaastiga oo ah 1: 1 koob, 1 koob oo saabuunta dareeraha ah iyo 400 g oo qoryo qoryo ah. Dhamaan kuwan isku dhafan oo ka tag meel mugdi ah saddex maalmood. Wakhti ahaanba u walaaq. Iska ilaali isku darka, isticmaal toddobaadkii hal mar.
In baaldi 10 litir ah, isku dar 50 g oo ah basbaaska cas iyo 50 g oo ah ash sigaar ah biyo diirran. Ku adkeyso 2-3 maalmood, ka dibna ku dar saabuun 3 qaado iyo 200 g oo qoryo qoryo ah. Ka dib markaad isku dhufato 1 mar 2 toddobaad.
Boorar karkariyo iyo tansy (1 kg kasta) 2 litir oo biyo ah. Maraq la jarjaray ilaa 10 litir iyo shan qaado oo saabuun.
Ku qoy kolleyga yar yar ee la qalajiyey 2 litir oo biyo ah karkaraya, cadaadis, ku walaaq 10 litir oo biyo ah kuna dar 5 qaadooyin oo saabuun.
Wixii dagaal iyo ka hortagga aphids ayaa ka caawin doona dhirta in aysan u dulqaadan karin, iyo cayayaanka in ay cuni. Iyadoo eggplants aad dhali kartaa fennel, basasha, miro, naas, toon. Aromas ka mid ah dhirta kuwaasi waxay ka cabsadaan cayayaanka. Cayayaanka oo ku quudiya aphids - ladybug, qashinka dhulka, caarada yareeyaha iyo qashinka. Laakiin waxaa haboon inaad xusuusatid in qaar ka mid ah ay burburin karaan dalagyada kale ee koray.
Dhirta oo sidoo kale u baahan daaweyn: boodh, tufaax, walnut, khudradda, cherry.
Waxyeellada aasaasiga ah waxaa sabab u ah xilliga firaaqada ee geedo shimbireedka. Dareeraha, jiilaalka dhulka, iyadoo kululaanaya dusha sare. Awood u leh inuu gowso jirida geedka dhalinyarada, iyo sidoo kale quudinta miraha. Ka muuqo dhulka furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo. Laba bilood oo dhan, waxay ku quudiyaan dalagyada beeraha, ka dibna ku barbaar.
Muddo hal mar, waxay hayn karaan 2,000 oo ukun. Kuwa ugu khatarsan waa maraakiibta ka badbaaday jiilaalka. Dirxiga soo muuqda waxaa lagu burburiyaa xal kiimikada ah "Inta badan", "Karbofos", "Kinmiks". Ka hortagga ayaa daboolaya ciidda ka dib markii la waraabiyo oo laga saaro haramaha.
Sidee loola tacaalaa caddaanka cadaanka ah
Xilliga xagaaga, cagaarka ayaa siinaya in ka badan 15 jiil. Muuqaalkiisu waa mid caadi ah oo dhulka la xiro, halkaasoo uu jiro qoyaan badan oo leh heerkul sare. Goobaha jecel - koriyo iyo koriyo. Cayayaanka ayaa ku dhajiya cabitaanka ukunta. Ku yaalla gadaasha xaashida, iyo dusha sare ee xaashida hoose waxaa ku jira dunta cadcad (qoryaha cadaanka ah), kaas oo fangasku horumaro. Waxaa la aaminsan yahay in fangasku ka yimaado waxyeelo badan oo geedo ah.
Nidaamka xakamaynta waxay la mid yihiin burburinta aphids, wakiilada kiimikada waxaa loo tixgeliyaa waxtarka: "Actellic" - wax ka badan 4 daaweyn, raacitaanka tilmaamaha. "Kalsooni" - isticmaalka hal mar. "Pegasus" - 2 jeer leh isugeyn todobaad ah.
Habka bayoolojiga ah ee xakamaynta waa dib-u-dhigga enkarzii. Dumarku waxay dhigtaa ugxanta jidhka ee caddaanka ah, tani waa hab wax ku ool ah. Macruufka macdanta macdanta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa. Qaababka dadweynaha: hoos u dhig heerkulka aqalka dhirta lagu koriyo, dabaysha dabka, faleebo toon. Ka Hortagga: hawo ku filan, nidaamyada heerkulka qoyaanka, nidaamka beeritaanka ee ukunta, nafaqada dhirta. Cadawga dabiiciga ah ee caddaanka ah waa caleen.
Siyaabaha loola dagaallamo baradhada baradhada Colorado
Cayayaanka Kuwani waxay ka dhaqaaqaan dusha baradho ilaa geedo iyo eggplant dhirta dadka waaweyn. Caleemaha waxaa la cunaa oo la diraa dirxiga, kaas oo sidoo kale ku quudiya dheecaanka iyo saxarka caleemaha geedka.
Si aad u ilaaliso geedo laga bilaabo Colorado baradho baradho, waxaa lagu soo lifaaqay dayrarka gaarka ah. Haddii duqsulku degay on eggplant, laakiin weli ma dhigin dirxiga, waa la goyn karaa by gacanta. Marka dirxiga soo baxo, daaweynta kiimikada waxaa loo isticmaalaa: Calypso, Prestige iyo cayayaanka kale ee ka yimaada barafka Baradiidka Colorado.
Haddii geedi socodka koritaanka eggplant aad la kulantay weerarka cayayaanka, ha quusan. Marka hore, go'aanso qofka aad la tacaaleyso si aad u ogaatid sida loo daweeyo geedo ukunta iyo cayayaanka. Waqtiga daaweynta geedo waxay siin doontaa fursad ay ku kobcaan hadhuudh iyo dhadhan fiican leh.